Ngokuvamile ubuhle bentombazane bungaphazamisa izinwele ezimnyama ezandleni. Ukususwa kwezinwele kuyinkinga engathandeki kakhulu, ngoba ingakhula futhi ibe mnyama futhi ibe nzima, ngaphezu kwalokho, izinwele ezikhulayo ziqala ukugwaza. Kodwa nokho le ndlela ivame phakathi kwabesifazane abaningi. Ngakho ake sibheke ukuthi ungasusa kanjani futhi usikhanyise izinwele ezandleni zakho ngengozi encane.
Izindlela zokususa izinwele ezandleni
Into yokuqala yokucabangela yindlela yokukhipha izinwele, ngoba ngosizo lwakhe ezandleni zabesifazane ungasusa izinwele ezingadingeki. Ukuqhuba inqubo enjalo kuzodinga inombolo enkulu yamadivayisi namathuluzi akhethekile angathengwa esitolo sezithombeni. Labo abafuni ukuchitha isikhathi sabo sokuzihlaziya abafuni ukuya emasiloni, lapho emaminithini ambalwa inkosi izosusa izinwele ezandleni zabo.
Kuze kube yimanje, kunezindlela zokwabhula, ama-chemical and mechanical:
Indlela ye mechanical iyona ejwayelekile kakhulu futhi esheshayo. Kodwa unenkinga: izinwele ezisusiwe engalweni zingakhula zibe isikhumba, ngaphezu kwalokho, le nqubo iyabuhlungu.
Indlela yamakhemikhali yokuqeda izinwele ayiyona ethandwa kakhulu. Iqukethe ekusetshenzisweni kwama-creams akhethekile, aqukethe izinto ezingabhubhisa isakhiwo sezinwele, ezenza kube lula ukususwa kwezinwele. Ukuqothulwa kwamakhemikhali kunwetshwa isikhathi eside, ngokungafani nokusebenza. Kukhona nokuntuleka kwalendlela: kungaphazamisa isikhumba sowesifazane, okuyokwandisa ingozi yokuphendula okweqile. Uma ikhambi lokuqothula ligcwele kakhulu phezu kwesikhumba, khona-ke kukhona amathuba okuthola ukushiswa kwamakhemikhali. Indlela yamakhemikhali ayibuhlungu ngokuphelele.
Ukukhishwa kwezinwele ze-Laser kuwumncintiswano wenqubo ye mechanical neyomakhemikhali yokuqeda izinwele ezingafuneki. Ukukhipha izinwele ze-laser kuphela kuma-salons akhethekile futhi kuphela ngabadwebi abaqeqeshwe ngokukhethekile. Le nqubo cishe ayikho into ephikisanayo, kodwa inezindleko eziphezulu, ngakho-ke, akuwona wonke owesifazane ongakwazi ukukhokhela le nsizakalo.
Ukukhanyisa kwezinwele ezandleni
Uma ungafuni ukususa izinwele ezandleni zakho, ungazama ukuwayeka. Namuhla, kunezindlela eziningi ezahlukene zokukhanyisa izinwele. Ngokuvamile, ukhilimu okhethekile noma eminye imikhiqizo isetshenziswe okudingeka ukuthi isetshenziswe esikhumbeni ngezilinganiso ezifanele. Ngemuva kokuphelelwa yisikhathi sesikhathi esivela ezandleni kubalulekile ukugeza amanzi ajwayelekile ajwayelekile. Emva kokucaciswa, kubalulekile ukusebenzisa ukhilimu oshubile esikhumbeni, ngoba kusiza ukugwema ukucasula isikhumba.
Ngingayenza kanjani izinwele zami ekhaya?
Ukuze unciphise izinwele zendlu ekhaya, ungasebenzisa izindlela ezivamile. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthenga i-hydrogen peroxide, i-hydroperite evamile kanye ne-chamomile mhluzi. Ukwehlisa izinwele ngezandla nge-hydrogen peroxide, udinga ukuxuba kancane i-hydrogen peroxide ngamanzi, engeza utshwala obuncane kanye nesoda, khona-ke isisombululo esizoholela ekusebenzeni isandla. Kodwa lapha into eyinhloko okufanele ucatshangelwe yukuthi akudingeki ukuba ihlutswe esikhumbeni. Ngemuva kwemizuzu embalwa, ikhambi kufanele lihlanzwe ngamanzi.
I-Chamomile iyindlela enhle yokukhanyisa izinwele ezandleni zakho. Le ndlela yasetshenziswa esikhathini esidala futhi namuhla nayo iyathandwa. Kumele kube umhluzi we-chamomile ukuze usebenzise izinwele ezimnyama. Isikhathi sokuqala sokukhanda izinwele angeke sisebenze, ngoba lokhu kuyadingeka ukuba wenze le nqubo njalo, kodwa ayinayo imiphumela emibi. Kungcono ukukhetha izikhambi zabantu, ngoba ngeke zilimaze izinwele nesikhumba.
Kwabesifazane abaningi, izinwele ezingafuneki kuyinkinga enkulu. Kodwa ngenxa yalezi zindlela ezingathengi, ungakwazi ukuxazulula izinkinga ezihambisana nezitshalo ezandleni. Futhi iyiphi indlela esiseduze nawe - zikhethele wena!
Uhlobo lwezempilo kanye nokusilisa umzimba
PURE SAVON - okungaphezu nje kwensipho!
Ukudla okunempilo kwesikhumba
Isifuba esihle ekhaya
I-scallops ne-ananaspa salsa
U-Ilya Reznik wabiza izinkanyezi zaseRussia ezihahayo ezabuyela eJurmala
Indlela yokufundisa ingane ukubuyisela umyalelo?
Izitayela eziyinhloko ngendlela yesimiso sasebusika
Amakhukhi ku-microwave emizuzwini emi-5
I-borsch yase-Ukraine, ubuchwepheshe bokupheka
I-pate eqoshiwe evela kubhontshisi
Ummbila osikiwe nge-bacon kanye noshizi
Isaladi nge-squid neqanda
Kuvela nini ukuhlakanipha kukababa wakho?
Halloween 2016: kuphi ukugubha - izenzakalo kanye namaqembu eMoscow naseRussia
I-Royal blue: iqoqo lokuhlobisa iMAC Blue Nectar 2016
Kusho ukuthini ukudla kahle?